UN probe sought - The Zimbabwe Independent
HomePoliticsUN probe sought
PARTICIPANTS at the African Civil Society Consultation on Zimbabwe have called on the United Nations to investigate mounting human rights abuses in the country.
ce=”Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif”>The group represents 30 African human rights and civil society organisations from Zimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia, Malawi, Zambia and Kenya.
Following its meeting in Botswana in August, the group last month issued a statement condemning human rights abuses and the humanitarian crisis in Zimbabwe and called for UN intervention.
“We also request once again that the UN High Commissioner for Human Rights and other UN human rights bodies take measures to investigate and publicly denounce all human rights violations that are being committed in Zimbabwe,” the group said.
It said Zimbabwean civil society and human rights activists were under constant attack by government.
“Lawyers, judges, trade union leaders, journalists, churchmen and members of non-governmental organisations have been threatened, arrested, beaten, tortured and harassed throughout the year, and with no sign of respite,” said the group.
It expressed concern about the on-going violations of human rights in Zimbabwe and the attitude of several governments in the region to the crisis. The group called for concerted efforts at regional and international levels to ensure an end to all human rights abuses in Zimbabwe.